Izindatshana zikaMichael Reynolds Martech Zone |
Imibhalo nge UMichael Reynolds
Kungani ama-RFP ewebhusayithi engasebenzi
ULwesibili, May 14, 2013 ULwesithathu, May 15, 2013 UMichael Reynolds
Njengenhlangano edijithali ebhizinisini kusukela ngo-1996, sithole ithuba lokwenza amakhulukhulu amawebhusayithi ezinkampani nongenzi nzuzo. Sifunde okuningi endleleni futhi sesiyitholele inqubo yethu emshinini oneoli. Inqubo yethu iqala ngeplani yewebhusayithi, esivumela ukuthi senze umsebenzi wokuqala wokulungiselela futhi sinikeze imininingwane neklayenti ngaphambi kokuba sifike kude kakhulu nomgwaqo wokucaphuna nokuklama. Ngaphandle kweqiniso lokuthi
NgeSonto, ngoJulayi 1, i-2012 NgeSonto, ngoJulayi 1, i-2012 UMichael Reynolds
Ngiyavuma… isimemezelo sakamuva sokwehlukana phakathi kwe-Twitter ne-LinkedIn siyifudumezile inhliziyo yami. Abantu ngeke besakwazi ukuqhumisa izibuyekezo zabo ze-Twitter ngaphandle kokucabanga ngaphandle kokungena futhi bahlanganyele. Ngenkathi ngazi ukuthi abanye babelana ngokujabula kwami, yini ubuhle kanye nobubi bokuxhumanisa i-akhawunti yakho ye-Twitter namanye amanethiwekhi? Njengoba i-Facebook isavumela lo mkhuba, kusenzeka namanje. Ngenkathi kungishayela amantongomane, ngizovuma
Izinqubo ezi-5 zocingo zebhizinisi ezilimaza umkhiqizo wakho
NgoMsombuluko, Februwari 21, 2011 NgoMgqibelo, Okthoba 29, 2011 UMichael Reynolds
Ukuqhuba ibhizinisi elincane kunzima futhi kuyacindezela. Uhlala ugqoke izigqoko eziningi, ucisha imililo, futhi uzama ukwenza wonke amadola welule ngangokunokwenzeka. Ubheke iwebhusayithi yakho, izimali zakho, abasebenzi bakho, amakhasimende akho, nomkhiqizo wakho futhi unethemba lokuthi ungathatha izinqumo ezinhle njalo. Ngeshwa, ngazo zonke izinkomba abanikazi bamabhizinisi amancane bayadonswa, kungaba nzima ukubeka isikhathi esanele nokunaka ekuphawuleni. Noma kunjalo,
NgoMsombuluko, Februwari 14, 2011 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 UMichael Reynolds
Njengoba kungenzeka uyazi, ukubhuloga kungumsebenzi omuhle wokumaketha okuqukethwe futhi kungaholela ezingeni elithuthukisiwe lenjini yokusesha, ukuthembeka okuqinile, kanye nokutholakala kwemithombo yezokuxhumana okungcono. Noma kunjalo, esinye sezici ezinzima kakhulu zokubhuloga singathola imibono. Imibono yebhulogi ingavela emithonjeni eminingi, kufaka phakathi ukuxhumana kwamakhasimende, imicimbi yamanje, nezindaba zomkhakha. Kodwa-ke, enye indlela enhle yokuthola imibono yebhulogi ukusebenzisa kalula isici semiphumela esheshayo seGoogle. Indlela eya
NgoLwesibili, Januwari 25, 2011 NgoMgqibelo, Okthoba 29, 2011 UMichael Reynolds
Abantu abaningi abangaziyo bayazi ngokuthandana kwami ​​ne-Inbox Zero. Okokuqala okwenziwe wathandwa nguMerlin Mann, i-Inbox Zero kuyindlela yokuphatha i-imeyili yakho nokugcina ibhokisi lakho lokungenayo lingenalutho. Luhlelo olukhulu lokukhiqiza lwe-imeyili. Ngithathe imiqondo, ngayihlanza kancane, futhi ngangeza ama-twist amasha ambalwa. Ngiphinde ngifundise izikhathi zokufunda ngokukhiqiza kwe-imeyili njalo. Yize ngingumlandeli omkhulu, hhayi wonke umuntu
Kusangimangaza ukuthi zingaki izinkampani ezicasha kumakhasimende azo. Bengikwenza ucwaningo ngesonto eledlule konjiniyela bohlelo lokusebenza lwe-iPhone ngoba ngineklayenti elidinga uhlelo lokusebenza lwe-iPhone. Ngibuze abanye abantu ku-Twitter. Douglas Karr wanginika ukuhanjiswa futhi ngangazi nokudluliselwa okukodwa kusuka engxoxweni edlule nomunye umngani. Ngiye kumawebhusayithi ezinkampani ezintathu ezahlukahlukene futhi ngokushesha ngakhungatheka. Ngamunye
NgoLwesithathu, Juni 23, 2010 NgoLwesine, ngo-Okthoba 29, 2015 UMichael Reynolds
Ngiqaphele le-tweet evela kuChuck Gose izolo futhi ibhekise kundatshana ekuwebhusayithi yeNew York Times ebizwa nge- “Email: Press Delete.” Njalo lapho sonke sibona lezi zinhlobo zezindatshana ezenza ukukhala ngokuthi “i-imeyili ifile!” futhi siphakamise ukuthi kufanele sibheke imikhuba yesizukulwane esisha ukubona ukuthi sizoxhumana kanjani ngokuzayo. UChuck ucabange ukuthi lokhu kuyadina futhi wathi i-imeyili ayipheli
I-CMS Expo: Igugu Phakathi Kwezinkomfa Zokumaketha Nezobuchwepheshe eMidwest
ULwesithathu, May 12, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 UMichael Reynolds
Ngibe nenjabulo yokukhuluma e-CMS Expo ngesonto eledlule eChicago. Bengiqala ngqa ukuhambela le ngqungquthela bengingaqiniseki ukuthi ngilindeleni. Kwangimangaza kakhulu ukuthi kwakukuhle kanjani. ICMS Expo iyinkomfa yokufunda neyebhizinisi enikezelwe ku-Content Management Systems kanye nezinsizakalo zewebhusayithi. Ifaka amathrekhi amaningi agxile kuzindikimba zebhizinisi nezobuchwepheshe. Amathrekhi amahlanu kulo nyaka